2. အသိဉာဏ်မှိန်မှိန်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် စောင့်ကြည့်ထားသော အကွာအဝေးအတွင်း ရွေ့လျားပြီးနောက် သတ်မှတ်တောက်ပမှုအတိုင်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် ရွေ့လျားနေကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
3. သန့်စင်သော မီးမလောင်နိုင်သော သုံးပေါက် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပေါက်ကွဲတတ်သော ဓာတ်ငွေ့နှင့် မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဓာတ်ပုံမက်ထရစ် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သည်။
5. Tempered glass အကြည် အဖုံး။Atomized anti-glare ဒီဇိုင်း၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သက်ရောက်မှု၊ အပူပေါင်းစပ်မှု၊ အလင်းထုတ်လွှင့်မှု 90% အထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
6. အဆင့်မြင့် drive ပါဝါနည်းပညာ၊ ကျယ်ပြန့်သောဗို့အားထည့်သွင်းမှု၊ အဆက်မပြတ်လက်ရှိ၊ အဖွင့်ပတ်လမ်းကာကွယ်မှု၊ တိုတောင်းသောပတ်လမ်းကာကွယ်မှု၊ ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးစသည်ဖြင့်။
7. နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် LED မော်ဂျူးများစွာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် optical ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အလယ်တန်းအလင်းဖြန့်ချီရေးစနစ်၊ အလင်းသည် ပျော့ပျောင်းသည်၊ အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ≥120lm/w၊ အရောင်ဖော်မှုမြင့်မားသည်၊ အသက်တာရှည်သည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။
8. အဖွင့်အပူပေးသောလေပြွန်သည် မီးအိမ်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုသေချာစေရန်အတွက် အလင်းရင်းမြစ်နှင့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးအပူကို ထိရောက်စွာဖြာထွက်စေသည်။
9. အဆင့်မြင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနည်းပညာသည် မြင့်မားသောအကာအကွယ်၊ စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုကို သေချာစေသည်။
10. လိုအပ်သလို အလင်းဝင်သည့်ထောင့်ကို ချိန်ညှိပေးသည့် သီးသန့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကွင်းပိတ်ချိန်ညှိမှု ယန္တရား။
1. မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်တွင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွေးချယ်ပါ၊ မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ပြီးနောက် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အမှတ်အသားကို ပေါင်းထည့်ပါ။သီးခြားလက္ခဏာမှာ- "ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် - သတ်မှတ်ချက်ကုဒ် + ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံခြင်းအမှတ်အသား + မှာယူမှုအရေအတွက်"။ဥပမာအားဖြင့်၊ IIC အလင်းတန်းအမျိုးအစားမှိန်မှိန်အလင်းဆီ 60W လိုအပ်ပါက၊ ပမာဏသည် 20 sets ဖြစ်ပြီး၊ မှာယူမှုမှာ- "Model: FCD63-Specification: F60Z+ExdIIC T6 Gb+20" ဖြစ်သည်။
Model Implication Features 1. အကာအရံအား မြင့်မားသော အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းထားသည်။၎င်း၏ အပြင်ဘက်သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဖိအားမြင့်သော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပက်ဖြန်းထားသည်။အရံအတားတွင် အားသာချက်အချို့ရှိသည်- တင်းကျပ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆပစ္စည်းများ၊ ကြီးမားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ကောင်းမွန်သောပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ။၎င်းတွင် ပလတ်စတစ်အမှုန့်များ၏ ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှု နှင့် ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။အပြင်ပိုင်းသည် သန့်ရှင်းပြီး လှပသည်။2. ပုံသွင်းခြင်း၊ ကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လှပသော...
Model Implication Features 1. လေးထောင့်အကာအရံကို အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။၎င်းအား ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော မြင့်မားသော ကြံ့ခိုင်မှုရှိသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းထားသည်။၎င်း၏ အပြင်ဘက်သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဖိအားမြင့်သော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပက်ဖြန်းထားသည်။2. မီးအိမ်အား မြင့်မားသော ပို့လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘောရိုဆီလီကိတ်ဖန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အပြင်ဘက် တွယ်ကပ်များကို သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။3. ၎င်းတွင် အလျားလိုက် တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် နံရံတွင် တပ်ဆင်ခြင်း ရှိနိုင်သည်။ချိန်ညှိနေသည်...
Model Implication Features 1. Aluminum alloy die-casting shell, မျက်နှာပြင်ကို လျှပ်စစ်ဖြန်းထားပြီး ပုံပန်းသဏ္ဌာန် လှပသည်။2. ၎င်းသည် မြင့်မားသော borosilicate tempered glass ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအဖုံး၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအဖုံးကို atomization နှင့် anti-glare ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်သည်၊ အပူပေါင်းစပ်မှုကိုခုခံနိုင်ပြီး၊ အလင်းပို့လွှတ်မှု 90% အထိရှိသည်။3. မြင့်မားသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော Stainless steel နှင့်ထိတွေ့ထားသောတွယ်ကပ်များ။4. အဆင့်မြင့် drive ပါဝါနည်းပညာ၊ ကျယ်ပြန့်သောဗို့အားထည့်သွင်းမှု၊ အဆက်မပြတ်ထိန်းညှိပေးသော...